Entomophobia (tahotra ny bibikely) ary ny fomba itondrana azy
Fobias bibikely mahazatra sy ny fomba fitondrana azy ireo
Ny bibikely bibikely, antsoina koa hoe entomôbôbia , dia tahotra be loatra na tsy atahorana amin'ny bibikely. Izany tahotra izany dia avy amin'ny fahavetavetana na fanilikilihana mifandray amin'ny endrika, asa, na koa ny isan'ireo bibikely. Ny fanehoan-kevitra amin'ny bibikely natahorana dia mety manalasala noho ny fampihorohoroana mahery vaika.
Fôbias misy bibikely
Tahotra antsaina: Myrmecophobia
Tahotra ny bettles: Skathariphobia
Tahotra ny tantely: Apiphobia
Tahotra ny zato taona: Scolopendrphobia
Tahotra kakakaka: Katsaridaphobia
Tahotra ny crickets: Orthopterophobia
Tahotra ny lalitra: Muscaphobia
Tahotra ny katsaka: Mottephobia
Tahotra mosquitos: Anopheliphobia
Tahotra ofisialy : Sphexophobia
Maro ireo entomôbôbia mijaly no miezaka ny manalavitra ny fihaonan'ny fiaraha-misakafo any ivelany na amin'ny toe-javatra izay mety hisy ny fifandraisana amin'ny bibikely. Izany fahasamihafana izany dia misy fiantraikany amin'ny lafiny maro amin'ny fiainana, anisan'izany ny asa, ny sekoly, ary ny fifandraisana. Olona iray misy taratra mpirenireny dia mahatsapa fa manao fihetsika manafintohina izy ireo, saingy tsy mahavita mifehy ny fihetseham-pony.
Nahoana no matahotra ny bibikely ny olona?
Maro ny olona manana fanjavonan'ny bibikely noho ny antony marim-pototra. Ny bibikely sasany dia miaina ary mihinana amin'ny vatan'olombelona . Ny bibikely, anisan'izany ny moka, ny fleas ary ny tsiro dia afaka mampita aretina amin'ny olombelona. Rehefa mamahana izy ireo, dia mety handefa protective parasitika , bakteria, na aretina hafa izay mety hiteraka aretina lehibe, anisan'izany ny aretin'i Lyme, ny tazo Q, ny tazo Rocky, ny tazomoka ary ny aretina afindran'ny toritenin'i Afrika. Ny fiombonan'ny bakteria amin'ny aretina no mahatonga antsika hihevi-tena amin'ny bibikely ary mahatonga ny faniriana hisoroka azy ireo mba ho voaro.
Ny antony iray hafa mahatonga ny olona tsy tia bibikely dia noho ny fijerin'izy ireo. Ny anatomika anatomika dia avy any an- tanindrazantsika tanteraka - ny bibikely sasany dia manana fanampiny fanampiny, maso, na faritra hafa ankoatra ny olombelona. Ny fomba fiasan'ny bibikely dia mety hanome ny olona sasany ho fihetseham-po mahatsiravina na ny fahatsapana fa misy zavatra mikitroka amin'izy ireo. Ho an'ny hafa, ny bibikely dia manindrona ny fahatsapan'izy ireo ny fanaraha-maso ny tontolo iainana. Manindrona ny toerana misy anay manokana izy ireo ary mety hipopotipotehana amin'ny zavatra ara-pahadiovana manokana. Mampanahy antsika ny fahatsapantsika ny filaminan-tsaina sy ny fahadiovana izany faniriana izany.
Ny bibikely ihany koa dia afaka manaparitaka ny fahatsapana ho fahavetavetana na fanadalana. Ity valim-panentanentanana ity dia miovaova amin'ny kolontsaina ary mifandraika amin'ny fironantsika ara-boajanahary handà ny zavatra mety hahatonga antsika marary.
Inona no mitranga amin'ny Phobia bibikely?
Na dia tsy misy antony marina aza ny fandalovan'ny bibikely, dia mety hampitombo ny tahotra misimisy kokoa noho ny fifandonana ratsy ny olona . Raha misy olona iray mitsangatsangana amin'ny tantely na miondrika amin'ny afo midedadeda , ny traikefa mampalahelo dia mety mahatonga azy ireo hikorontana amin'ny fisian'ny hadisoana. Ny tahotra ny bibikely koa dia mety ho valim-bavaka avy amin'ny fitondrantenan'ireo manodidina azy. Ny ankizy izay nanatri-maso ny ray aman-dreny iray na ny olon-tiany dia mihetsika amin'ny tahotra ny bibikely dia manana fironana hamaly ny bibikely toy izany koa. Ireo izay nijaly tamin'ny lozam-pifamoivoizana nateraky ny lozam-pifamoivoizana teo am-pandrenesana dia mety hampitombo ny karazam-borona. Ankoatra izany, ireo olona mijaly amin'ny fahaketrahana sy ireo manana olana ara-pananahana dia mety hiteraka bibikely na karazam-biby hafa koa.
Ny aretina tebiteby dia miteraka fikorontanana izay mahatonga ny olona hihetsika amin'ny fomba tsy maontina ary hisoroka ny zavatra atahorany, na dia misy aza ny loza mety hitranga. Ny fanerena dia fanehoan-kevitra mahasoa izay manomana antsika hamaly ny toe-javatra izay mitaky fifantohana amin'ny fifantohana. Ny fihenjanana dia ny fihetsiky ny vatantsika amin'ny loza mety hitranga (alika barking) na amin'ny toe-javatra mampientanentana (mandeha amin'ny fiaramanidina). Rehefa miaina ireo toe-javatra ireo, dia mandefa famantarana ho fanafahana adrenalinina ny rafi-pitondrantenantsika . Ity hormonina ity dia manomana ny vatantsika hiady na handositra. Adrenaline dia mampitombo ny rà mandriaka ao amin'ny fo , ny havokavoka , ary ny hozatra mampitombo ny fahabetsahan'ny oksizenina any amin'ireo faritra ireo amin'ny fiomanana amin'ny asa atao. Adrenaline koa dia mampivelatra ny saintsika hahatonga antsika hahafantatra bebe kokoa ny antsipirian'ny toe-javatra iray. Ny faritra iray amin'ny ati-doha antsoina hoe amygdala dia mitantana ny ady na ny valin'ny valiny . Ireo olona manana bibikely sy biby hafa dia mahatsapa izany toe-javatra mampatahotra izany rehefa miatrika toe-javatra iray na zavatra iray izay atahorany. Izany fahasamihafana izany dia misy fiantraikany eo amin'ny asany ara-batana sy ara-psikolojika raha toa ka manana adihevitra mihetsi-po amin'ny zavatra atahoran'ny olona ilay olona, ​​na dia tsy voamarina aza izany.
Ny olona manana phobias amin'ny bibikely dia mety hahatsapa ny alahelon'ny tebiteby . Ny sasany dia manana fanehoam-pahalemana, raha ny hafa kosa tsy afaka mandao ny trano noho ny tahotra ny fihaonana amin'ny bibikely. Ny sasany dia mahatsapa fientanam-po lalina na fahatsapana ho reraka izay mety hipoitra toy ny fanafihana mahery vaika.
Ny soritr'aretina mifandray amin'ny bibikely dia ahitana:
Amin'ny toe-javatra faran'izay trotraka, tsy afaka mijery sary na fanoritana bibikely akory izy, na mety hamoy ny fanaraha-maso rehetra amin'ny ezaka handosirana bibikely. Ireo olona ireo dia tsy afaka manao fihetsika mahazatra. Ireo izay manana phobia dia mahatakatra fa tsy misy dikany ny fihetseham-pony, saingy tsy afaka misoroka azy ireo.
Fikitan'ny Phobia bibikely
Ny fôbias amin'ny bibikely dia matetika no raisina amin'ny fitsaboana mahazatra sy ny fitsaboana. Ity fomba roa ity dia mifantoka amin'ny fikarakarana ny tahotra, ny tahotra, ny fanahiana mifandray amin'ny bibikely ary ny valin'ny fitondran-tena amin'ny bibikely. Mba hanampiana azy hiatrika ny fihetseham-po ara-pihetseham-po, dia mampianatra teknika fialam-boly ny mpitsabo mba hahafahan'ilay olona mianatra mampitony ny tenany. Ny mpitsabo ihany koa dia manampy ny olona hamantatra sy hamerina ny fomba fisainana izay manamafy ny fahatsapana tahotra. Raha manao izany izy dia afaka manomboka mieritreritra momba ireo bibikely matahotra azy ireo izy. Manomboka amin'ny fianarana momba ny bibikely amin'ny alalan'ny famakiana boky sy gazety, sary an-tsipiriany, miaraka amin'ny antsipiriany momba ny bibikely. Ny fianarana momba ny andraikitra tsara raisin'ireo bibikely milalao ny tontolo iainana dia hanampy azy ireo hanana fomba fijery voalanjalanja momba ny bibikely. Ny fiheverantsika ny fiantraikany amin'ny fihetseham-pontsika sy ny fihetseham-pontsika dia mitarika ny fitondran-tenantsika.
Mba hisorohana ny valin'ny fitondran-tena amin'ny bibikely feno tahotra, matetika ireo mpitsabo dia mampiasa fitsaboana amin'ny fitsaboana . Izany dia miteraka fanandramana mihatra amin'ny bibikely, izay mety hanomboka amin'ny zavatra tsotra toy ny fisainana momba ny bibikely. Tao anatinny fianarana iray, nisy tovolahy iray nisy tovolahy feno bibikely niharan'ny habetsaky ny fifandraisana tamin'ny crickets. Anisan'izany:
Mitazona crickets sira.
Manohina kilalao miaraka amin'ny tongony.
Mitsangana amin'ny efitrano misy crickets mandritra ny 60 segondra.
Mametraka cricket amin'ny tànana manaloka.
Mitantana cricket amin'ny tanana mangatsiaka mandritra ny 20 segondra.
Mamela cricket iray hikapoka ny sandriny.
Ny fivoahana tsikelikely amin'ny bibikely natahorana dia manampy ny olona hiatrika tsikelikely ny tahony mandra-pahatongany any amin'ny toerana izay tsy ahiahiny intsony amin'ny bibikely. Ny fitsaboana fanandramana dia hita fa mahomby amin'ny famerenana ny valim-panafahan'ny mpiaro ny vatana. Ny paikadin'ny fiarovan-tenan'ny fiarovan-tena dia fanehoan-kevitra mivantana amin'ny rafi-pitabataban'ny vatana izay manampy antsika hiaro amin'ny loza. Raha heverintsika ho zavatra mampidi-doza isika, dia mamaly araka ny tokony ho izy ny vatantsika mba hisakanana antsika tsy hahita loza sy hisorohana ny fiainana. Noho izany, rehefa misy olona mitabataba be dia be amin'ny fomba tsy ahafahana manimba azy, dia mihamafy ny fitondran-tena ao amin'ny atidoha. Izany fanamafisana izany dia mitranga na dia tsy andrin'ny fanantenana aza ny ratsy.
Ny fanivanana ny fifandraisana amin'ny bibikely, dia manampy ny olona manana phobia bibikely miaiky fa ny vokatra tena mety amin'ny manodidina na ny fifandraisana amin'ny bibikely iray dia tsy izay noeritreretin'izy ireo amin'ny fisainany loatra. Rehefa mandeha ny fotoana, dia hianatra ny atidoha fa tsy ilaina ny valiny mahavariana. Ny fampiasana fanamafisana ny fampihetseham-po miaraka amin'ny fomba fanavakavahana dia heverina hanampy ny olona hiantoka vokatra tsara amin'ny bibikely. Ohatra, mety homena valisoa ho an'ny olona iray ny famonoana bibikely iray mandritra ny 20 segondra. Manampy ny olona hahita ny bibikely amin'ny fahazavana tsara kokoa. Ny fitsaboana sahaza dia afaka mampihena tanteraka ny tahotr'izy ireo ny bibikely feno bibikely mpihinana na manimba tanteraka ny tahotra.
Cisler, Josh M., Bunmi O. Olatunji, ary Jeffrey Lohr. "Fahaverezana, tahotra, ary aretim-panahy: Famerenana mitsikera." Fitsaboana ara- tsosialy 29.1 (2009): 34-46. PMC. Web. 25 Nov. 2017.
Jones, KM, ary PC Friman. "Fomba fianarana ny fanombantombanana amin'ny fitondran-tena sy ny fitsaboana ny" phobia "amin'ny bibikely." Journal of Analytical Behavior Analysis 32.1 (1999): 95-98. PMC. Web. 25 Nov. 2017
Pachana, Nancy A, Rana M Woodward, ary Gerard JA Byrne. "Fitsaboana ny Phobia manokana amin'ny olon-dehibe." Fanabeazana ara-pahasalamana amin'ny fahanterana 2.3 (2007): 469-476. Print.
Tombon'ny Cycada Periodika
12 Karazam-borona maloto ratsy indrindra
Inona no mahatonga ny bibikely mandona?
Manao ahoana ny moka?
Vavaka mivavaka: ilay mpaninjara Mantodea
Ahoana no fomba hananganana ny kitapom-bary vitrana manokana ho anao
Ny bibikely madinika indrindra eran-tany
Ahoana ny fomba fampiasana safidy fieboanana safidy
10 Mahavariana ny moka
5 Ny angano momba ny dragona
Mpanjaka ve no Mampiofana Zokiolona? Karazan-tsakafo
Namkaran Ny Hindu Naming Ceremony
Mianara momba ny Mt. Fipoahana St. Helens izay namono olona 57
Inona no mandrafitra ny Omer?
Inona no tsy tokony hampidirina ao amin'ny fandaharam-pianaranao Vitae (CV)
The Strike Pullman of 1894
Cosmos Faharoa 13 Jereo ny asa fanaovana asa
Mercer University GPA, SAT sy ACT Data
Skateboarding FAQ: Ahoana no Hialana Amin'izao Fotoana Izao?
Fantaro ny fomba hiakarana ny Tendrombohitra Kahtadin, tendrombohitra avo indrindra any Maine
Fanampiana ara-bola fanampiana ara-bola: Ahoana no ahafahan'ny sekoly tsy miankina mamita fanampiana?
Fiarahamonina sy Ecosystems
Ny BASE Jumper's Guide to Lauterbrunnen, Soisa
Tabilao fanoherana elektrônika sy fitondran-tena
Ireo Top 10 Ireo zavaboary mahagaga indrindra amin'ny vanim-potoana maoderina
'Para,' raha manaraka ny tsy fahita firy dia matetika no 'mandidy'
Fanamafisana ny menan'ny fitantanana ny fitantanana fitondran-tena
10 Tsara indrindra ny 'Epiphany SpongeBob SquarePants'
Inona no Atao hoe Trano? Trano Winter ho an'ny razambentsika taloha
Ny sora-pianaran'i Saint Mary-of-the-Woods
Ny tantaran'ny fananganana an'i Afrika Atsimo